Rasaas lagu furay gaari uu la socday Imaam Maxamed Yuusuf - Awdinle Online
Rasaas lagu furay gaari uu la socday Imaam Maxamed Yuusuf
Ciidamo ka tirsan kuwa Asluubta Soomaaliyeed ayaa Galabta waxaa ay agagaarka Maxkamadda Gobolka Banaadir ku rasaaseeyeen Gaari uu la socday Imaamka Beesha Mudullood Imaam Maxamed Yuusuf.
Goobjoogayaal ayaa waxaa ay ku warameen in Gaariga la rasaaseeyay uu kasoo gudbay Koontoroolka koobaad, hayeeshee markii uu marayay koontoroolka labaad la rasaaseeyay, waxana ka dhashay khasaaro dhaawac ah oo soo garay askarta ilaalada u aheyd Imaamka & Nabadoono kale oo la socday.
Nabadoonada ayaa waxaa xilliga la rasaaseeyanayay Gaariga ay la socdeen ay ka yimaadeen gogosha Tacsida Janeraal Maxamed Nuur Galaal, waxaana ay marayeen wadada dheer ee hormarta xabsiga Dhexe ee Muqdisho.
Laamaha ammaanka dowladda federaalka Soomaaliya weli wax faah fahin ah kama bixin falkaan, waxaana uu kusoo aadayaa xilli Maanta qarax ismiidaamin ah oo geystay khasaaro uu ka dhacay isgoyska sayidka ee Magaalada Muqdisho.
Previous articleMeydadka Afar Ruux oo la helay & xog cusub oo laga helay
Next articleAkhriso:- 12 Qodob oo ay ku heshiiyeen Beelo ku dagaalamay Galgaduud